Tag: Fampisehoana an-tranonkala | Martech Zone
Tag: Fahombiazan'ny tranokala
Taona maro lasa izay, tsy maintsy nifindra ny tranonkalantsika tamina mpampiantrano vaovao izahay rehefa nanomboka niadana sy niadana kokoa ilay mpampiantrano anay ankehitriny. Tsy misy te hanova orinasa mpampiantrano… indrindra ny olona mampiantrano tranonkala marobe. Ny fifindra-monina dia mety ho dingana maharary. Ankoatry ny fanamafisana ny hafainganana dia nanolotra fifindra-monina maimaimpoana i Flywheel ka fandresena azo. Tsy nanana safidy aho, na izany aza, raha omena an'io ny tena asa ataoko dia ny manatsara ny tranokala